अमलाः भिटामिन सी का अतिरिक्त यस्ता छन् बहुपयाेगी गुण – Saurahaonline.com
अमलाः भिटामिन सी का अतिरिक्त यस्ता छन् बहुपयाेगी गुण
एजेन्सी : अमला प्रकृतिमा पाइने अमूल्य फल हाे । प्रकृतिमा निःशुल्क पाइने याे बहुगुणी फल हो । युर्वेदिक दृष्टिकोणले पनि अमलाको अति नै महत्व छ । अमलामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी पाईन्छ ।
अमलाकाे सेवनले आँखाको रोशनी बढ्नुका साथै बच्चाको झाडापखाला समेत निको पार्छ । अमलामा रहेको तत्वले दिमाग तेज बनाउँछ भने छालाको समस्याबाट दूर राख्छ । यसका अलावा अमलाको अन्य धेरै फाइदाहरु छन् । आउनुहोस्, हामी अमलाको फाइदाहरु जानिराखौँ-
१. कपाल टुक्रनबाट रोक्छ
२. आँखाको ज्योति बढाउँछ
६. अनावश्यक बुृढोपना हटाउँछ
कोही कोही मानिस उमेरै नपुगी बुढो देखिन्छ । यदि यस्तो हो भने अमलाको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । अमलाको नियमित सेवनले चाउरिएको अनुहार फुकाउँछ र बुढ्यौलीपना देखाउँदैन।
अमलाको सेवनले निद्रा नलाग्ने समस्या हटेर जान्छ ।
राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद बिहारमा सरकारी कामले जाँदै थिए । राँची पुगेपछि उनलाई आफ्नो जुत्ता फाट्न लागेको.....